शान्तिसुधाको २४ औ वार्षिको त्सव | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / शान्तिसुधाको २४ औ वार्षिको त्सव
शान्तिसुधाको २४ औ वार्षिको त्सव
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार January 12, 2018	0 52 Views
घो राही, २७ पुस । शान्तिसुधा उच्च माध्यमिक विद्यालयको २४ औ ं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीवार विद्यालयको प्रांगणमा एक कार्यक्रम आयो जना गरी विद्यालयले आफ्नो वार्षिको त्सव मनाएको हो  ।
विद्यालय व्यवस् थापन समितिका अध्यक्ष दामो दर खनालको अध्यक्षता एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय से वा आयो ग सुर्खे तकी अध्यक्ष डा. राधा शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बो ल्ने वक्ताहरुले विद्यालयमा भएको शै क्षिक कमीकमजो रीहरुलाई सुधार गर्दै गुणस् तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने मा जो ड दिएका थिए । उनीहरुले अबको शिक्षा परम्परागत नभएर आधुनिक हुनु
पर्ने मा जो ड दिए् । परम्परागत शिक्षाले राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले भो लिको दिनमा बे रो जगार मात्र सिर्जना गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो  ।
कार्यक्रममा बो ल्दै प्रमुख अतिथि डा. शाहले अबको शिक्षा सै द्धान्तिक मात्र नभएर संस् कारिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउनुभयो  । उहा“ले अबको शिक्षा प्राविधिक र रो जगारमुखी हुनुपर्ने मा जो ड दिनुभयो  ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनयकुमार मिश्रले विद्यायलको गत वार्षिक प्रतिवे दन प्रस् तुत गर्नुभएको थियो  । प्रतिवे दन प्रस् तुत गर्दै उहा“ले विद्यालयका आगामी यो जना र रणनीतिका बारे मा जानकारी दिनुभएको थियो  ।
सो अवसरमा विद्यालयका छात्रछात्राहरुले विज्ञान प्रदर्शनी गरे को थिए । कक्षा १० सम्मका छात्रछात्राहरुले गरे को प्रदर्शनीमा उनीहरुले घरे लु सामग्रीको प्रयो ग गरे र बनाएका सामग्री राखेका थिए । त्यस् तै छात्रछात्रहरुले विभिन्न नृत्य, गीत र नाटक प्रदर्शन गरे का थिए ।
विद्यालयका उप–प्रधानाध्यापक बालकृष्ण डिसीको स् वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा पूर्व छात्रा समीक्षा मिश्रलगायतले बो ल्नुभएको थियो  । कार्यक्रमको सहजीकरण विद्यालयकी शिक्षिका हुमा के सीले गर्नुभएको थियो  ।
Previous: बेलबासेको सन्तुष्टि भुताहा गाईपालनमा
Next: मजदुर लगाएर सडकको धुलो सफा गरिदै